Musqul (Af Ingiriis : toilet; Af carabi: مرحاض) sidoo kale loo yaqaano Kaniif iyo Suuli waa qol ka mid ah dhisme kaasi oo loogu tallogalay in dadku ku qashin baxaan. Asal ahaan shaqada ugu muhiimsan ee musqushu waa in dadku ku bogtaan hoowsha saxarooda iyo kaadida, waxaase intaasi dheer maanta in musqulaha loo isticmaalo qubeyska, nadiifinta wejiga iyo madaxa iyo cadayashada. Dhinaca kale, musqushu waxay ka kooban tahay goob ama meel loogu talogalay in saxarada iyo kaadidu gasho kaasi oo qaarkood laga dul dhiso wax lo yaqaabo Boo. Musqushu waxay ku xidhan tahay shabakad bulaacado ah oo qaada wasakhda kuwaasi oo loo yaqaano Habka Wasakh qaadista.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Musqul&oldid=169191"
Last edited on 11 Juun 2017, at 10:36
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 11 Juun 2017, marka ee eheed 10:36.